कृषिको विकासका लागि प्रविधी चाहिन्छ | Agrokhabar
Home Uncategorized कृषिको विकासका लागि प्रविधी चाहिन्छ
कृषिको विकासका लागि प्रविधी चाहिन्छ
on: April 22, 2016 In: Uncategorized, कृषि कुराकानीNo Comments
साना किसान विकास वै्क एंव नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम वहादुर पाठक संगको कुराकानी
1.नेपालमा साना किसानको स्थाईत्व र व्यवसायिक अभ्यास कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
नेपाल एउटा यस्तो प्रकृतिको देश हो जहाँ कृषि व्यवसायको विकल्पहरु धेरै कम छन् ।कृषिको व्यपक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु भनेको नै साना किसानको स्थाईत्व हो । गाउँका नागरिककलाई अपनत्व महशुस गराएर खोलिएको र उनिहरुकै सहभागितामा सञ्चालन हुने भएकाले यसको स्थाईत्वमा कुनै चिन्ता छैन । साना किसानहरुलाई एकतृत गरी आम नागरिकलाई यसका आवश्यकता, महत्व र दिर्घकालिन उपलब्धिका वारेमा ढोकाहरु खोल्ने काम साना किसान कृषि सहरकारी केन्द्रीय संघले गर्दछ भने विक्तिय सहयोगका लागी साना किसान विकास वैङ्क रहेकोले यसको स्थाईत्व रहेको साना किसानको सफलताले देखाएको छ ।
जहाँसम्म व्यवसायिक अभ्यासको विषय छ । नेपालमा अहिले अधिकासं कृर्षकहरु व्यवसायिक मानसिकताबाट प्रशिक्षीत छन् । कुनै समय निर्वाहमुखी कृषिबाट अहिले साना किसानहरु व्यवसायिक अभ्यासमा लागेका छन् । इलाम, झापा, बर्दीया, धादिङ, नवलपरासी, कालिकोट लगाएतका साना किसानका व्यवसायिक अर्गानिक उत्पादन यसका राम्रो उदाहरणहरु हुन ।
2.साना किसान भनेको के हो ?
यसमा हामी सवै प्रष्ट छौ । यसको नाममै अर्थ छ जस्तो लाग्छ । साना किसान सानो पूँजि, सानो उत्पादन, सानो वजार तर व्यवसायिक अभ्यास नै यसको खास अर्थ हो ।विषेश गरी जग्गा कम भएको, आप्mनै उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्ने, उत्पादन गरेपनि अत्यन्तै न्यून उत्पादन गर्ने जो शहर वजार भन्दा बाहिर वस्छन र उनिहरुको कृषिसंग सरोकार राख्ने सरोकारवालासंग कम पहुँच छ । तर अहिले यसलाई पनि किसान दाजुभाई दिदिवहिनीहरुले ठूलो उत्पादन गरेर साना किसानको परिभाषा नै बदलदिनुभएको छ । जे होस व्यवसायिकता तर्फ उन्मुख नेपालको कृषि व्यवसायलाई आम नागरिकसंग जोडेर आयत प्रतिस्थापन र आर्थीक समृद्धिका लागी सानो तिनो भएपनि आय आर्जनका कार्यमा संलग्न कृर्षक नै साना किसान हुन ।
3.	साना किसान सम्म सूचना प्रविधीको पहुँच कसरी पु¥याईन्छ ?
तपाईको यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको खास चुनौतिको विषय पनि यही हो । तपाईको प्रश्नलाई दुई भागमा विभाजन गर्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ।
१.सैद्धान्तिक सूचना प्रविधी ः
नेपालमा अहिले परम्परागत कृषि कर्मबाटै आएका व्यक्तिहरुको वाहुल्यता छ । त्यसैले खास कृषि प्रविधीको ज्ञान विनै परम्परागत रुपमा गर्दै आएको अभ्यासलाई जोड दिएर कार्य गरिएको देखिन्छ । जसले कृर्षकले राम्रो उत्पादन लिन सकिरहेका छैनन । अव आम कृर्षकमा कृषि प्रविधीको सैद्धान्तिक ज्ञानको आवश्यकता देखिन्छ । जुन साना किसान कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले आप्mना नेटवर्कका सदस्यहरुमा सुरु गरेको छ भने साना किसान विकास वैङ्क पनि लागेको छ । यस्तै पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले पनि यसमा केही पहल कदमी सुरु गरेको छ । जुन सकारात्मक हो ।
२.प्रविधीक प्रविधी ः
अहिलेकृषि उत्पदानमा बढाव लिनका लागी विभिन्न उपकरणहरुको विकास भएको छ । त्यस्ता प्रविधीमा आधारीत रहेर नेपालका कमै किसानहरुले अभ्यास गरेको देखिन्छ । यदी नेपालका आम नागरिक कृषि पेशामा रहँदै गर्दा प्रविधीको प्रयोगलाई सहज र सहुलियत वनाउने हो भने अहिले आयत हुने अर्वौ कृर्षी उपज रोकेर हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौ ।
4. समस्या के हो ?
अझै पनि प्रविधीको समस्या छन् । प्रविधीलाई सहज रुपमा पुयाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिले हेर्दा मल, विउको समस्या छ । लगानीको समस्या, बजार र सडको समस्या, कृर्षि औजार, ढुवानी साधन, शुलभ कर्जा, सहज परामर्श, समस्या परेको समयमा तत्काल प्राविधीक नपाईने खेतीवाली सखाप हुने समस्या अर्को नेपालको कृर्षकको मुख्य समस्या हुन ।
5. साना किसानलाई सहयोग गर्ने निकायहरु के के हुन ?
हो किसानहरु अहिले सहयोग, समर्थन र हौसलाको पर्खाईमा रहेको देखिन्छ । काम गर्ने तर तालिम, प्रशिक्षण, औजार, नयाँ नयाँ प्रविधीको वारेमा जानकारी दिने संस्थाका वारे जानकारी नहुने किसान धेरै हुनुहुन्छ । अव नेपालमा सरकारी र गैर सरकारी निकायबाट विभिन्न सहयोगहरु आईरहेको हुन्छ । तर त्यसका वारेमा जानकरी नहुँदा वास्तविक कृर्षकहरु सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । अहिले नेपालमा
कृषिविकास मन्त्रालय, कृर्षि विभाग, पशु निर्देशनालय, जिल्लामा कृषि विकास कार्यलय, पशु सेवा कर्यालय, भेटेनरीहरु सरकारले सञ्चालन गरेको छ । यस्तै ः एफ.ए.ओ. हिमाली, आईफार्ड, प्यक्ट लगाएतका विभिन्न संघसंस्था कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक विसकाका लागि काम गरिरहेका छन् । जहाँबाट आम कृर्षहरुले भरपुर फाईदा लिन सक्नुहुन्छ ।
कृषि संग सम्वन्धित कार्यक्रमका केही झलकहरु
विरेन्द्रनगरमा सकारात्मक सोच सम्वन्धी १ दिने तालिम सम्पन्न
बलियो वन्दै छ नेपाल कृषिको सञ्जाल